Ilaalinta xogta > Vielhuber David
Macluumaadka soo socdaa wuxuu bixinayaa aragti guud oo fudud oo ku saabsan waxa ku dhacaya xogtaada shakhsi ahaaneed markaad booqato degelkan. Xogta shaqsiyeed waa dhammaan macluumaadka shaqsiyan lagugu aqoonsan karo. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mawduuca ilaalinta xogta waxaa laga heli karaa bayaankayaga ilaalinta macluumaadka ee ku hoos qoran qoraalkan.
Xog uruurinta degelkan
Dhinaca kale, xogtaada ayaa la uruuriyaa markaad noo soo gudbiso. Tani waxay noqon kartaa, waayo. Tusaale ahaan xogta aad ku soo gasho foomka xiriirka.
Xogta kale waxaa lagu duubaa si otomaatig ah ama ogolaanshahaaga ah markaad booqato websaydhka nidaamyadeenna IT-ga. Tani badanaa waa xog farsamo (tusaale, biraawsarka internetka, nidaamka hawlgalka ama waqtiga bogga la daawaday). Xogtan waxaa si otomaatig ah loo ururiyaa isla marka aad gasho degelkan.
Qaar ka mid ah xogta ayaa la uruuriyaa si loo hubiyo in websaydhku aanu khalad ka jirin. Xog kale ayaa loo isticmaali karaa in lagu falanqeeyo habdhaqankaaga isticmaale.
Maxay yihiin xuquuqda aad ku leedahay xogtaada?
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaad ku saabsan asalka, qaataha iyo ujeedka xogtaada shaqsiyadeed ee aad kaydisay bilaash markasta. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato sixitaanka ama tirtirka xogtaan. Haddii aad ogolaanshahaaga siisay ka shaqeynta xogta, waad ka noqon kartaa ogolaanshahan wakhti kasta oo mustaqbalka ah. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad codsato in ka shaqeynta xogtaada shakhsi ahaaneed la xadido xaaladaha qaarkood. Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad dacwad ka gudbiso hey'adda kormeerka ee awooda u leh.
Waxaad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta cinwaanka lagu siiyay ogeysiiska sharciga haddii aad wax su'aalo dheeraad ah ka qabtid ilaalinta xogta.
Markaad booqato websaydhkan, habdhaqankaaga baafinta waxaa lagu qiimeyn karaa tiro ahaan. Tan waxaa badanaa lagu sameeyaa barnaamijyada loogu yeero falanqaynta.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan barnaamijyadan falanqaynta bayaanka ilaalinta xogta soo socota.
2. Shabakadaha Marti-gelinta iyo Wax-bixinta (CDN)
Degelkan waxaa martigeliya adeeg bixiye dibadeed (hoster). Xogta shakhsiga ah ee lagu duubay degelkan waxaa lagu keydiyaa server-yada martida loo yahay. Tani waxay ugu horreyn ku lug yeelan kartaa cinwaanada IP, codsiyada xiriirka, meta iyo xogta isgaarsiinta, xogta qandaraaska, faahfaahinta xiriirka, magacyada, marin u helka websaydhka iyo xogta kale ee laga soo saaray websaydhka.
Marti-geliyaha waxaa loo adeegsadaa ujeedada ah inuu fuliyo qandaraaska macaamiisheena suurtagalka ah iyo kuwa jira (Art. 6 Para. 1 lit.b GDPR) iyo iyadoo loo daneynayo badbaado, deg deg ah oo hufan oo lagu bixiyo dalabkeena khadka tooska ah ee bixiye xirfadle ah (Art. 6 Para . 1 shidan.f GDPR).
Martigeliyahayagu wuxuu kaliya ka baaraandegi doonaa xogtaada maadaama tani ay lagama maarmaan u tahay inay fuliso waajibaadkeeda waxqabadka ayna raacdo tilmaamahayaga ku saabsan xogtan.
Waxaan u adeegsannaa hiwaayadaha soo socda:
Gabagabada qandaraaska howsha dalbashada
Si loo hubiyo ka shaqeynta ilaalinta u hogaansanaanta ilaalinta xogta, waxaan ku soo gabagabeynay qandaraas ku shaqeynta amar dalkeena
3. Xog guud iyo macluumaad qasab ah
Hawlwadeenada degelkan waxay si dhab ah u tixgelinayaan ilaalinta macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaan ula dhaqmeynaa xogtaada shaqsiyeed si qarsoodi ah oo waafaqsan sharciga qawaaniinta ilaalinta xogta iyo bayaanka ilaalinta macluumaadka.
Markaad isticmaaleyso degelkan, waxaa la aruurinayaa xog shaqsiyadeed oo kala duwan. Xogta shaqsiyadeed waa xog lagu aqoonsan karo shaqsi ahaan. Bayaankaan ilaalinta xogta wuxuu sharaxayaa xogta aan aruurino iyo waxa aan u isticmaalno. Waxay kaloo sharraxeysaa sida iyo ujeeddada tan loo sameeyay.
Ilaa mudada kaydinta gaarka ah aan lagu qeexin bayaanka ilaalinta macluumaadka, macluumaadkaaga shaqsiyeed wuu nala sii joogi doonaa ilaa ujeedada howsha xog uruurinta aaney khusayn. Haddii aad sameyso codsi sharci ah oo ah in la tirtiro ama aad la noqoto ogolaanshahaaga ka baaraandegidda xogta, xogtaada waa la tirtiri doonaa, illaa aynaan haysan sababo kale oo sharci ahaan loo oggol yahay oo aan ku kaydin karno xogtaada shaqsiga ah (tusaale ahaan xilliyada canshuurta ama ganacsiga lagu hayo); xaalada dambe, tirtirka wuxuu dhacayaa kadib sababahan awgood lama adeegsanayo.
Xusuusin ku saabsan wareejinta xogta ee USA
Qalabka ka socda shirkadaha fadhigoodu yahay USA ayaa lagu soo daray websaydhkeenna. Marka qalabkani firfircoon yahay, xogtaada shakhsi ahaaneed waxaa loo gudbin karaa server-yada Mareykanka ee shirkadaha kala duwan. Waxaan jeclaan laheyn inaan tilmaamno in USA aysan aheyn wadan seddexaad oo nabdoon macnaha sharciga ilaalinta macluumaadka EU. Shirkadaha Mareykanka waxaa waajib ku ah inay u soo bandhigaan macluumaadka shakhsiga ah hay'adaha amniga adigoon adigu ahayn qofka aad quseyso inuu tilaabo sharci ah ka qaadi karo tan. Sidaas darteed meesha lagama saari karo in mas'uuliyiinta Mareykanka (tusaale, adeegyada qarsoodiga ah) ay ku shaqeeyaan, qiimeeyaan oo ay si joogto ah ugu keydsadaan xogtaada server-yada Mareykanka ujeeddooyin kormeer. Wax saameyn ah kuma leenahay howlahan ka shaqeynta ah.
Hawlo badan oo ka baaraandegidda xogta ah ayaa suurtogal ah oo keliya oggolaanshahaaga degdegga ah. Waad la noqon kartaa ogolaanshahaaga wakhti kasta. Sharci ahaanta ka shaqeynta xogta la qabtay ka hor kala noqoshada wali saameyn kuma yeelan dib u noqoshada.
Xuquuqda diidmada ururinta xogta kiisaska gaarka ah iyo xayeysiinta tooska ah (Qod. 21 GDPR)
Haddii ka baaraandegidda xogta ay ku saleysan tahay Qod. 6 Para. 1 Lit. E ama F GDPR, waxaad xaq u leedahay inaad diiddo ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed waqti kasta sababaha ka dhashay xaaladdaada gaarka ah; tani waxay sidoo kale khuseysaa ku-takhasusidda ku saleysan qodobadan. Saldhigga sharciyeed ee howsha lagu saleynayo waxaa laga heli karaa bayaanka ilaalinta macluumaadka. Haddii aad diiddo, dib dambe ugama shaqeyn doonno xogtaada shakhsiga ah ee aad quseyso, illaa aan caddeyn karno sababo sharci ah oo khasab ku ah howsha oo ka culus danahaaga, xuquuqdaada iyo xorriyadaha ama howsha ay u adeegsaneyso inay sheegato, jimicsiiso ama difaacdo sheegashooyinka sharciga ah Diidmo sida ku xusan Qod. 21 para. 1 GDPR).
Haddii xogtaada shaqsiyadeed loo shaqeynayo si ay ugu shaqeyso boostada tooska ah, waxaad xaq u leedahay inaad ka dhiidho waqti kasta oo lagu shaqeynayo xogta shaqsiyadeed ee adiga kugu saabsan ujeedada xayeysiintaas darteed; Tani waxay sidoo kale khuseysaa ku-takrifalka hadba inta ay la xiriirto xayeysiinta tooska ah. Haddii aad diiddo, macluumaadkaaga shakhsiyeed markaa looma isticmaali doono ujeeddooyin suuq-geyn toos ah (diidmo sida ku xusan Qod. 21 (2) GDPR).
Xuquuqda rafcaanka hey'adda kormeerka ee awooda leh
Haddii ay dhacdo xadgudubyada GDPR, maadooyinka xogta waxay xaq u leeyihiin inay dacwad u gudbiyaan hay'adda kormeerka, gaar ahaan gobolka xubin ka ah meesha ay deggan yihiin ee caadiga ah, goobta ay ka shaqeeyaan ama goobta xadgudubka lagu eedeeyay. Xuquuqda rafcaanku waxay jirtaa iyada oo aan loo aabo yeelin daaweynta kale ee maamulka ama garsoorka.
Sababo nabadgelyo awgood iyo in la ilaaliyo gudbinta waxyaabaha qarsoodiga ah, sida amarrada ama weydiimaha aad noo soo dirto annaga oo ah hawl wadeenka websaydhka, degelkani wuxuu adeegsadaa sirta SSL ama TLS. Waad ku garan kartaa isku xirnaanta sirta ah xaqiiqda ah in cinwaanka cinwaanka biraawsarku uu ka beddelayo "http: //" una beddelo "https: //" iyo calaamadda qufulka ee khadkaaga biraawsarka.
Haddii sirta SSL ama TLS la hawlgeliyo, xogta aad noo soo gudbiso ma aqrin karaan dhinacyada saddexaad.
Macluumaadka, tirtirka iyo sixitaanka
Qaabka ku xusan qodobada sharciga ah, waxaad xaq u leedahay inaad si bilaash ah uga hesho macluumaadkaaga shakhsiga ah ee aad keydisay, asal ahaan iyo cidda heleysa iyo ujeedada howsha xog uruurinta iyo, haddii loo baahdo, inaad saxdo ama tirtirto xogtaan. Waxaad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta adreska ku qoran ogeysiiska sharciga ah haddii aad wax su'aalo dheeraad ah ka qabtid mowduuca xogta shaqsiyeed.
Xuquuqda xaddidaadda hawsha
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato in la xakameeyo ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed. Waxaad nala soo xiriiri kartaa wakhti kasta adreska ku qoran ogeysiiska sharciga ah. Xaq u lahaanshaha xaddidaadda howsha ayaa ka jirta kiisaska soo socda:
Haddii aad ka doodid saxnaanta macluumaadkaaga shaqsiyeed ee aan kaydinay, badiyaa waxaan u baahanahay waqti aan ku hubino tan. Muddada baaritaanka, waxaad xaq u leedahay inaad codsato in la xakameeyo ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed.
Haddii ka shaqeynta xogtaada shaqsiyadeed ay u dhacday / ku dhacday si sharci darro ah, waxaad codsan kartaa xadidaadda ka shaqeynta xogta halkii laga tirtiri lahaa.
Haddii aynaan mar dambe u baahnayn xogtaada shakhsi ahaaneed, laakiin aad uga baahan tahay inay jimicsi sameeyaan, difaacaan ama caddeeyaan sheegashooyinka sharciga ah, waxaad xaq u leedahay inaad codsato in ka shaqeynta xogtaada shakhsi ahaaneed la xaddido halkii laga tirtiri lahaa.
Haddii aad soo gudbisay diidmo sida ku cad Qod. 21 Faqrada 1aad GDPR, danahaaga iyo kuweenna waa in la miisaamaa. Ilaa iyo inta aysan weli caddayn cidda dantu ku jirto, waxaad xaq u leedahay inaad codsato in la xakameeyo ka shaqeynta xogtaada shaqsiyeed.
Haddii aad xadiday ka baaraandegidda xogtaada shakhsi ahaaneed, xogtan - marka laga reebo keydintooda - waxaa lagu oggolaan karaa oo keliya oggolaanshahaaga ama aasaasidda, jimicsi ama difaaca sheegashooyinka sharciga ah ama ilaalinta xuquuqda qof kale oo dabiici ah ama sharci ah ama sababaha danta guud ee muhiimka ah awgeed. ay ka shaqeeyaan Midowga Yurub ama waddan xubin ka ah.
4. Xog uruurinta degelkan
Boggeena internetka waxay adeegsadaan waxa loogu yeero "cookies". Kukiyada waa faylal qoraal oo yar yar oo aan waxyeello u geysan qalabkaaga. Waxaa loo kaydiyaa si ku meelgaar ah inta lagu jiro kalfadhiga (kalfadhiyada kalfadhiga) ama si joogto ah (cookies joogto ah) qalabkaaga. Kukiyada fadhiga si toos ah ayaa loo tirtiraa booqashadaada kadib. Kukiyada joogtada ah ayaa ku sii harsan qalabkaaga illaa aad ka tirtirto naftaada ama biraawsarkaaga internetka si otomaatig ah ayuu u tirtirayaa.
Xaaladaha qaarkood, cookie-yada shirkadaha saddexaad ayaa sidoo kale lagu keydin karaa qalabkaaga markaad gasho degelkeenna (cookies-ka saddexaad). Kuwani waxay annaga ama adigaba noo suurta gelineysaa inaan adeegsanno adeegyo dhinac saddexaad ah (tusaale ahaan cookies si loogu sameeyo howlaha lacag bixinta).
Kukiyada waxay leeyihiin shaqooyin kala duwan. Kukiyada badan ayaa farsamo ahaan lagama maarmaan ah maxaa yeelay shaqooyinka websaydhka qaarkood ma shaqeyn doonaan la'aantood (tusaale ahaan shaqooyinka gaadhiga wax iibsiga ama muuqaalka fiidiyowga). Kukiyada kale waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo dhaqanka isticmaalaha ama in lagu muujiyo xayeysiinta.
Kukiyada loo baahan yahay si loo fuliyo habka isgaarsiinta elektiroonigga ah (cookies-ka lagama maarmaanka ah) ama siinta howlo gaar ah oo aad u baahan tahay (buskud shaqeynaya, tusaale ahaan howlaha gawaarida dukaameysiga) ama in la wanaajiyo websaydhka (tus. iyadoo lagu saleynayo Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR, haddii aan la helin aasaas sharciyeed oo ka duwan kan hadda jira. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu kaydiyo buskudka si farsamo ahaan qalad-la'aan ah iyo adeegyo la hagaajiyay. Haddii la oggolaaday kaydinta buskudka la codsaday, buskudyada ay khusayso ayaa si gaar ah loogu kaydiyaa iyadoo lagu saleynayo oggolaanshahan (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR); ogolaanshaha waa laga noqon karaa wakhti kasta.
Waad dejin kartaa biraawsarkaaga si laguu ogeysiiyo ku saabsan dejinta cookies-ka oo kaliya u oggolaato cookies-ka kiisaska shaqsiyadeed, ka reebitaanka aqbalaadda cookies ee kiisaska qaarkood ama guud ahaan, oo aad dhaqaajiso tirtirka otomaatiga ah ee cookies markii aad xirto biraawsarka. Haddii aad barkinta cookies, howsha websaydhkan waa la xadidi karaa.
Ilaa inta ay cookies u adeegsadaan shirkadaha dhinac saddexaad ama ujeedooyin falanqeyn ah, waxaan kugula socodsiin doonaa tan mid gooni ah iyadoo la raacayo qaabeynta bayaanka ilaalinta macluumaadka iyo, haddii loo baahdo, weydiiso ogolaanshahaaga.
Adeeg bixiyaha degelku si otomaatig ah ayuu u ururiyaa uguna kaydiyaa macluumaadka faylalka loo yaqaan 'server log files', kaas oo biraawsarkaagu si toos ah noogu soo gudbiyo. kuwani waa:
Xogtaan laguma dari doono ilaha xogta kale.
Xogtaan waxaa lagu soo aruuriyay iyadoo lagu saleynayo Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo ku saabsan soo bandhigista farsamo ahaan qalad-la'aanta iyo hagaajinta degelkiisa - faylasha faylasha serverka waa in lagu qoro tan.
5. Qalabka falanqaynta iyo xayeysiinta
Websaydhkani wuxuu adeegsadaa shaqooyinka adeegga falanqaynta websaydhka Google Analytics. Bixiyaha waa Google Ireland Xadidan ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
Google Analytics waxay u suurta gelisaa hawl wadeenka shabakada inuu falanqeeyo habdhaqanka booqdayaasha websaydhka. Hawl wadeenka degelku wuxuu helaa xog adeegsi oo kala duwan, sida aragtida bogga, muddada joogitaanka, nidaamyada hawlgalka ee la isticmaalay iyo asalka isticmaalaha. Xogtaan waxaa isku dari kara Google qaab muuqaal ah oo loo qoondeeyay isticmaalaha ama aaladdooda.
Google Analytics waxay isticmaashaa teknoolojiyad u saamaxeysa isticmaaleha in loo aqoonsado ujeedada falanqeynta dabeecadaha isticmaalaha (tusaale ahaan cookies ama faraha faraha). Macluumaadka ay soo uruuriso Google ee ku saabsan adeegsiga degelkan waxaa badanaa loo gudbiyaa adeegaha Google ee ku yaal Mareykanka oo lagu keydiyaa halkaas.
Qalabkan gorfaynta waxaa loo isticmaalaa iyadoo lagu saleynayo Qod. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Hawl wadeenka websaydhku wuxuu leeyahay dano sharci ah oo lagu falanqeeyo dabeecadaha isticmaalaha si loo wanaajiyo websaydhkiisa iyo xayeysiiskiisaba. Haddii oggolaansho u dhiganta la codsaday (tusaale ahaan oggolaanshaha keydinta buskudka), howshu waxay ku dhacaysaa si gaar ah iyadoo lagu saleynayo Qod. 6 Para. 1 lit. GDPR ah; ogolaanshaha waa laga noqon karaa wakhti kasta.
U gudbinta xogta ee USA waxay ku saleysan tahay heshiisyada heerka qandaraaska ee Komishanka EU. Faahfaahin waxaa laga heli karaa halkan: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .
Ka jooji Google Analytics
Waxaan ku hawlgalnay hawsha qarsoodiga IP-ka websaydhkan. Natiijo ahaan, cinwaankaaga IP-ga waxaa gaabin doona Google gudaheeda dowladaha xubnaha ka ah Midowga Yurub ama gobollada kale ee qandaraaska ku qaadanaya heshiiska ku saabsan Aagga Dhaqaalaha Yurub ka hor inta aan loo gudbin Mareykanka. Cinwaanka IP-ga oo buuxa waxaa kaliya loogu gudbiyaa adeegaha Google ee USA waxaana lagu soo gaabiyey halkaas xaalado aan caadi ahayn. Aniga oo ku hadlaya magaca hawl wadeenka degelkan, Google waxay u adeegsan doontaa macluumaadkan si ay u qiimeyso isticmaalkaaga websaydhka, si ay u soo uruuriso warbixinnada ku saabsan waxqabadka websaydhka iyo inay u siiso hawl wadeenka websaydhada adeegyo kale oo la xidhiidha hawlaha websaydhka iyo isticmaalka internetka. Cinwaanka IP-ga ee uu gudbiyo biraawsarkaaga oo qayb ka ah Google Analytics laguma biiri doono xogta kale ee Google.
Waad ka hortagi kartaa Google inuu aruuriyo oo uu ka baaraandego xogtaada adiga oo soo dejisanaya oo ku rakibaya qalabka furaha furaha ee laga heli karo iskuxiraha soo socda: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida Google Analytics ay u maareeyaan xogta isticmaalaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .
Waxaan ku soo gabagabeynay qandaraas ka shaqeynta amarka Google oo aan si buuxda u fulineyno shuruudaha adag ee mas'uuliyiinta ilaalinta xogta Jarmalka markaad isticmaaleyso Google Analytics.
Xogta ay ku kaydisay Google heerka isticmaalaha iyo dhacdada ee ku xidhan cookies, Aqoonsiga isticmaalaha (tusaale ahaan Aqoonsiga isticmaalaha) ama Aqoonsiga xayeysiinta (tusaale ahaan DoubleClick cookies, Aqoonsiga xayeysiinta ee Android) waa la qarinaya 14 bilood kadib ama la tirtiray Faahfaahin waxaad ka heli kartaa halkaan iskuxirka soo socda: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de